Sunday March 13, 2016 - 20:48:11 in Wararka by Super Admin
Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee Qaaradda Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo "Africom" David Redriguez ayaa sheegay inuu fashilmay dagaalkii ka dhanka ahaa Xarakada Alshabaab, isagoona tilmaamay in Ciidamada Afrikaanka ah la saaray culeys
Taliyaha Guud ee ciidamada AFRICOM
Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee Qaaradda Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo "Africom" David Redriguez ayaa sheegay inuu fashilmay dagaalkii ka dhanka ahaa Xarakada Alshabaab, isagoona tilmaamay in Ciidamada Afrikaanka ah la saaray culeys awoodooda ka badan, halka Ciidamada Soomaalidana ay la dhutinayaan culeysyo kala duwan oo soo food saaray.
Hadalkan ay quusta ka muuqato waxa uu General David Redriguez ka hor sheegay kulan lagu falanqeynayay Xaaladda ammaanka ee Soomaaliya oo ay yeesheen Guddiga Ciidamada Qalabka sida ee Golaha Congress-ka ee Mareykanka.
Si ka duwan hadallo ay horey u jeediyeen Saraakiil Mareykan ah, kuwaas oo qiimeyn ay horey u sameeyeen rajo ka muujiyay inuu soo hagaagaayo ammaanka Soomaaliya, waxa uu Jeneraal Redriguez dhankiisa meesha ka saaray rajadaasi, isagoo yiri :
"Alshabaab waxay sanadihii lasoo dhaafay ay lumiyeen dhul ballaaran oo ay maamulayeen, waxaa hoos u dhacay ilihii ay dhaqaalaha ka heli jireen, balse waxay awood u yeesheen inay kasoo kabtaan qeyb ka mid ah khasaarihii gaaray, iyagoo billaabay qaadista weerarro abaabulan oo halis ku ah dhammaan dowladaha Bariga Afrika”.
Mar uu qiimeyn ku sameynayay Maleeshiyaadka Dowladda Fedraalka ayaa Taliyaha Ciidamada Africom waxa uu sheegay inay weli ku tiirsanyihiin Ciidamada Amisom, sidoo kale wuxuu xusay in Ciidamada Soomaalida ay heysato hoggaan xumo, taageerada ay helayaan ee xagga lojistikada oo liidata iyo Ciidamada oo u kala qoqoban qaab beeleed, taas oo uu sheegay inay ragaadisay dhisidda Ciidamo tayo leh oo ay yeelato Dowladda Fedraalka.
Sida lagu daabacay bogga Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka, Hoggaanka Africom waxa ay soo bandhigeen khidad cusub oo ku talineysa in Mareykanku uu sii laba laabo dagaalka ka dhanka ah Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab, lana yeero ku tiirsanaanhaasha Ciidamada Amisom, islamarkaana la dhiso Ciidamo Soomaali ah oo ay leedahay Dowladda Fedraalka, kuwaas oo musqabalka badala Ciidamada Shisheeye ee Amisom.
Bilihii lasoo dhaafay, Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxay kordhisay weerarrada ay ku qaado Ciidamada Amisom, waxayna Ciidameeda ay xoog ku galeen Seddax saldhig oo ku kala yaalla gobollada Shabeellaha hoose iyo Gedo, halkaas oo ay ku dileen boqollaal ka tirsan Ciidamada Afrikaanka ah, waxayna gacanta ku dhigeen hub iyo Saanad Meliteri oo aad u badan iyo gawaari dagaal, taas oo sii xoojisay cabsida ay dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka ay ka qabaan Xarakada Alshabaab.
Dowladda Mareykanka waxay dhankeeda bilihii lasoo dhaafay fulisay dhowr weerar oo xagga cirka ah oo ay ku beeganeyso Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Duqeymahaas waxaa lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwii ugu cuslaa ee lagu qaado Xarakada tan iyo intii la aas aasay dhowr iyo tobon Sano ka hor, laakiin khubaro reer galbeed ah ayaa aaminsan inay adag tahay in weerarrada xagga cirka ay daciifiyaan awoodda Alshabaab, waxayna taas sabab uga dhigeen in Xarakadu ay horey u muujisay awoodda ay u leedahay kasoo kabashada weerarrada iyo fashilinta shirqoollada lagu doonayo in lagu kala fur furo.
Taliyaha Maleeshiyaadka Haramcad oo Muqdisho lagu weeraray.
Baare American ah oo ku baaqay in lasoo gaba gabeeyo dagaalka Mareykanka ee Soomaaliya [Dhageyso].
AFRICOM oo qiratay in dad Shacab ah ay ku dishay duqeyn ka dhacday gobolka Jubbada dhexe.
Taliyaha Booliska Sh/hoose oo ku dhaawacmay Qarax ka dhacay duleedka Muqdisho.
Max'med Cabdullaahi oo Mahad Guuleed Raysalwasaare KMG ah umagacaabay.
Al Shabaab oo sheegatay Weerar lagu beegsaday taliyaha ciidanka Melleteriga dowladda.